Sekuphele iminyaka elishumi zivaliwe indawo zoshishino eKuyasa – Elitsha
Sekuphele iminyaka elishumi zivaliwe indawo zoshishino eKuyasa
27th August 2019 Sinethemba MbewanaCape Town, Democracy, Iyavela, Oorhulemente basemakhaya, Small business, Uncategorised 0 Xhosa
IsiXeko sithi kukho inkokheli zasekuhlaleni zaseKuyasa ezinqanda kwaye zibagrogrisa ukuba bangafaki bantu kwezindawo zokushishina. Umfanekiso ngoka Sinethemba Mbewana
Nangona kwachithwa ikhulu elinamashumi asibhozo ezigidi zerandi (R180million) kwisikhululo sikaloliwe sase Kuyasa kodwa indawo zoshishino zisavaliwe.
Isixeko saseKapa sityhole ezinye inkokheli zase Kuyasa ngokuvalwa kwendawo zoshishino ebekumele ukuba ziyasetyenziswa. Ezi ndawo zineminyaka elishumi zingasetyenziswa. Ngokuka Grant Twigg olilungu likaSodolophu, isixeko siyathintelwa zezinye iinkokheli ekubeni kunikwe abathengisi kunye namashishini ezindawo zoshishino.
“IsiXeko siyathintelwa ekubeni sinike abahlali abathengisayo kunye namashishini ngabantu abazinkokheli zasekuhlaleni abathe gqolo ukoyikisa amagosa esiXeko kunye nababoneleli beenkonzo abatyunjiweyo kulo mmandla,” utshilo uTwigg.
Indawo zokuthengisa kwesi sikhululo sikaloliwe saseKuyasa sakhiwa ngonyaka ka 2008. Ngokuka Twigg, ezindawo zokushishina zokhiwa njengenxalenye yesikhululo sikaloliwe saseKuyasa kunye nesakhiwo sezithuthi zikawonke-wonke.
“Ezi ndawo zoshishino beziyinxalenye yophuhliso lukhulu olwathi lwafikelela kwikhulu elinesibhozo lwezigidi zerandi (R180.000000).” Akakwazanga ukutsho ukuba yimalini ethe yachithwa ekwakheni iivenkile zentengiso zodwa.
Uceba weWadi 95, u-Andile Lili akavumelani nesiXeko njengoko ekholelwa ukuba eyona ngxaki iphambili kukuba isiXeko sifuna ezindawo zoshishino zisetyenziswe ngabahlali bakwezinye iindawo.
““ISixeko sifuna ukuba ezi venkile zisetyenziswe ngabantu abavela kwezinye iindawo nangaphandle kweKhayelitsha. Asizukuyivumela lonto ngoba kukho abantu base Kuyasa aba neminyaka belindile ukuba ezindawo zoshishino zivulwe,” utshilo uLili.
Lo ka Lili, nolilungu lendlu yowiso-mthetho yephondo ngaphantsi kwe-African National Congress, utyhole isiXeko ngokurhuqa iinyawo kulo mba. “Oko zakhiwa, abantu bafaka izicelo zokusebenzisa ezi ndawo zoshishina kwaye basalindile nanamhlanje, iSixeko saseKapa kufuneka sibeke isaziso malunga nokufumaneka kwezindawo kodwa andiboni isiXeko sizizmisele ekwenzeni oko,”utshilo uLili.
Abo bashishina kufuphi nezindawo bathi zikude kwindawo ehamba abakhweli kwaye kufuneka kuqinisekiswe ukhuseleko. Umfanekiso ngoka Sinethemba Mbewana
UNosana Mamkeli othengisa iziqhamo kunye nemifuno kwisikhululo sikaloliwe uthe lendawo zikuyo ezi ndawo zoshishino zikude apho abakhweli bakaloliwe bahamba khona. “Izitali zikude kakhulu ekungeneni kwesikhululo sikaloliwe kungenxa yalonto singenakukwazi ukuzisebenzisa nokuba zingavulwa,” utshilo uMamkeli.
U-Asavela Kewu, oneshishini lokoja, ungqinelene nombono kaMamkeli ngendawo ezikuyo ezindawo zokushishina. “Ukuba irenti izakufikeleleka bendizakuzisebenzisa ezi ndawo kodwa ingxaki kukuba zikude,” utshilo.
Also read: Nigerian universities are suffering from neglect. Why this should stop
Abarhwebi baseZimbabwe, uGodingo Zinhiva kunye noManatsa Banga, baneshishini lokudibanisa intsimbi kufuphi nesikhululo sikaloliwe, bathe bangathanda ukusebenzisa indawo zoshishino ukuba nje ukhuseleko lungaqinisekiswa kwisikhululo sikaloliwe.
Ngenxa yokuba zingasetyenziswa ezi ndawo ziye zonakaliswa kwaye kuzofuneka zilungisiwe ngenye imali. IsiXeko sithi iindleko zokugcina iindawo zentengiso ziyakuthi zifumaneke ekupheleni kwenyanga yoMsintsi.
IsiXeko se Kapa
Isixeko asinasingcwangciso sokuphuhlisa indawo yamatyotyombe angakwindlela iBaden Powel
Imbongi ithi ukubonga yinto anoyikhetha ngamaxesha onke